Daawo Lafta-gareen oo u yeeray dhamaan guddoomiyaasha gobalka Shabeellaah Hoose | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo Lafta-gareen oo u yeeray dhamaan guddoomiyaasha gobalka Shabeellaah Hoose
Daawo Lafta-gareen oo u yeeray dhamaan guddoomiyaasha gobalka Shabeellaah Hoose
Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa u yeeray dhamaan guddoomiyaha maamulka gobalka Shabeelada Hoose, ku xigeenadiisa iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobalka, sida ay noo xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Ibraahim Aadan Najax, guddoomiyaha gobalka Shabeelada Hoose iyo wafdigiisa oo ka kooban ku xigeenada gobalka iyo kuwa degmooyinka ayaa gaaray Baydhabo, waxaana la sheegay in ay kulamo Baydhabo kula leeyihiin Lafta-gareen.
Southern Media ayaa heshay xog ku saabsan in wafdiga laga reebay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee gobalka Shabeellada Hoose, sidoo kalane ah guddoomiyaha Maaliyadda ee gobalkaasi Cabdiftaax Xaaji Cabdulle balse inta kale ee ka kooban kuwa gobalka iyo degmooyinka ay gaareen Baydhabo.
Wararka aan helnay ayaa sheegay in Lafta Gareen uu doonayo in uu sameeyo xil ka qaadis iyo magacaabis islamarkaana la xalin doono dhibaatooyin daran oo ka jira Shabeellada Hoose.
Bixitaan-ka masuuliyiintaan ayaa ku soo aadaya iyadoo gobalka Shabeellada uu wajahayo xaalado aad u daran oo dhanka ammaanka iyo arrimaha bini-aadanimada ah, waxaana muuqata in maamulka gobalka uu ku fashilmay maareynta musiibooyinka gobalka ka jira.
Taas waxaa kela sii dheer sida ay noo sheegeen ilo ku dhaw dhawo Xafiiska Lafta Gareen inuu Garab ay ku siyaan xulista xildhibaanada hada imaanaayo ay noqanin kuwa ka hor imaanaay waxa kasta dhaca intuu xilka haayo lafta gareen.
Previous articleLaba arrin oo ay sameysay DF oo SHARCI ka dhigaya doorashada A/MADOOBE
Next articleMilateriga Turkiga oo howlgalkii la sugayey ka bilaabay Woqooyiga Siiriya (Sawirro)